तपाईंको बच्चालाई टाइप १ डायबेटिस पत्ता लागेको छ। अब के? - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी कम्पनी, चेकआउट घरपालुवा जनावर कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण औषधि जानकारी समाचार, कल्याण कम्पनी, समाचार समुदाय स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार औषधि बनाम मित्र
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> तपाईंको बच्चालाई टाइप १ डायबेटिस पत्ता लागेको थियो। अब के?
तपाईंको बच्चालाई टाइप १ डायबेटिस पत्ता लागेको थियो। अब के?
तपाइँको बच्चाको टाइप १ मधुमेह पत्ता लगाउनु एक खेल परिवर्तनकर्ता हो। यो एक अपरिचित देशमा whisked भइरहेको जस्तै छ, जहाँ तपाईं नयाँ भाषा र दैनिक तालिका सिक्नु पर्छ। जबकि केहि चीजहरू परिचित देखिन्छ, खाना र व्यायाम जस्ता, केही तत्वहरू पूर्ण रूपमा नयाँ हुन्छन्, जस्तै इन्सुलिन लिने र रगत ग्लुकोजको स्तर जाँच गर्ने। बाल्यकाल मधुमेह नेविगेट र सबै चीज प्रभावी ढ work्गले काम गर्नका लागि सोच्न र गर्नेको सम्पूर्ण नयाँ तरीकाको आवश्यक पर्दछ।
यो डरलाग्दो र ठूलो हुन सक्छ - तपाइँको लागि र तपाईंको बच्चाको लागि।
टाइप १ मधुमेहले तपाईंको बच्चाको शरीरलाई कसरी असर गर्छ?
टाइप १ मधुमेह (T1D), कहिलेकाहीं किशोर मधुमेह भनिन्छ, तब हुन्छ जब तपाईंको बच्चाको शरीरले इन्सुलिन उत्पादन गर्न रोक्दछ, हर्मोन जसले खानाबाट ग्लूकोज (चिनी) लाई ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्दछ। यसको बिना, शरीर स्वाभाविक रूपमा रगतमा चिनीको स्तर नियन्त्रण गर्न सक्दैन। त्यसोभए, तपाईंको बच्चाले बाहिरी स्रोतबाट इन्सुलिन पाउनुपर्दछ sy सिरिंजद्वारा इंजेक्शन गरिएको वा शरीरमा इन्सुलिन पम्प भनिने शरीरबाट निषेचित। अन्यथा, रगतमा चिनीको मात्रा धेरै उच्च उकास्न सक्छ, जसले अन्धोपनबाट अ to्गमा र लामो समयसम्म स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउँदछ यदि उपचार नगरेमा अ damage्ग र अंग क्षतिको लागी।
रगतमा चिनीको मात्रा स्वस्थ दायरामा रहन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न तपाईको बच्चाले खाएपछि तपाईले औंलाको लम्बाबाट रगतको थोपा लिनु पर्छ र यसलाई परीक्षण गर्न ग्लुकोमिटर भनिने उपकरण प्रयोग गर्नु पर्छ। प्रत्येक परिणामले तपाईंको बच्चाले कति ग्राम कार्बोहाइड्रेट खान सक्छ, ईन्सुलिन खुराक, वा तपाईंको बच्चालाई कति व्यायाम चाहिन्छ मार्गदर्शन गर्दछ। उच्च रगत चिनी मात्र मुद्दा छैन। कम रगत चिनीले समस्या निम्त्याउन सक्छ जब तपाइँको बच्चाको शरीरमा पर्याप्त ईन्सुलिन र पर्याप्त खाना छैन। यो प्रबन्ध गर्न धेरै छ।
तपाइँ मधुमेह रोगीलाई कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
हामीले धेरै अभिभावक र मधुमेह विशेषज्ञहरूलाई सोध्यौं कि उनीहरूले बच्चाको नयाँ T1D निदानको सामना गर्नेहरूलाई के सल्लाह दिन्छन्। यहाँ उनीहरूका सल्लाहहरू छन्।
१. मूल कुरा सिक्नुहोस्।
मधुमेह व्यवस्थापन भोजन सेवन, व्यायाम, औषधि, र परीक्षण सन्तुलन समावेश छ रगत ग्लुकोजको स्तर परिवर्तन गर्न को लागी प्रतिक्रिया। बाल्यकाल मधुमेह को लागी कुनै उपचार छैन, तर त्यहाँ धेरै प्रभावकारी उपचारहरु छन्। बुझ्नुहोला कसरी प्रत्येक तत्व शरीर मा काम गर्दछ तपाइँको बच्चाको हेरचाह प्रबन्धनको लागि महत्वपूर्ण छ।
सबै भन्दा राम्रो समय एलर्जी को लागी singulair लिन को लागी
सम्पूर्ण परिवारका लागि शिक्षा महत्वपूर्ण छ, जेनिफर म्याक्रुडन, एपीआरएन, FNP-C, CDE, एक बोर्ड प्रमाणित परिवार नर्स चिकित्सक र प्रमाणित मधुमेह शिक्षक। JDRP वा ADA बाट वेबसाइटहरूमा मधुमेह सम्बन्धी लेखहरू पढेर आफैलाई शिक्षित पार्नु, समर्थन समूहहरू खोज्नु, सम्मेलनहरूमा भाग लिनु धेरै सहयोगी हुन्छ।
अमेरिकी मधुमेह संघ (एडीए) एक प्रदान गर्दछ टाइप १ मधुमेह हेरचाह पुस्तिका यो सबैको मद्दत गर्न एक स्वतन्त्र डाउनलोड को रूप मा। तपाईको बच्चाको स्वास्थ्य सेवा टोलीसँग कुरा गर्नुहोस्, र तपाईले सोच्न सक्ने हरेक प्रश्न सोध्नुहोस् - तिनीहरू त्यहाँ छन् तपाइँलाई तपाइँको बच्चाको निदान समायोजन गर्न सहयोग गर्न।
२.एक दिनमा एक दिन चीजहरू लिनुहोस्।
जबकि तपाईं बुझ्न सक्नुहुन्छ कि मधुमेह कसरी बौद्धिक स्तरमा काम गर्दछ, वास्तविकता केहि चीजहरू कहिलेकाहीँ हुन सक्छ जुन तपाईंको नियन्त्रण बाहिर महसुस गर्दछ। यो बच्चाको लागि तर आमा बुबाको लागि पनि धेरै तनावपूर्ण र डरलाग्दो समय हुन सक्छ, म्याक्रुडन भन्छन। सुईहरू पहिला दर्दनाक वा चिन्ताजनक हुन सक्छ। वा, हुनसक्छ तपाईंको बच्चा अन्य बच्चाहरूको अगाडि सर्तको सामना गर्ने बारे लज्जित छ वा बोझ जस्तो महसुस गर्दछ।
मधुमेह व्यवस्थापन एक सन्तुलित कार्य हो, नाटाक, म्यासाचुसेट्सकी लिसा गोल्डस्मिथ भन्छिन्, जसको छोरी 7. को निदान भएको थियो। तपाईं सबै कुरा ठीक गर्न सक्नुहुन्छ र अझै पनि उच्च वा कम रगतमा चिनी पाउन सक्नुहुन्छ। यो सटीक विज्ञान होईन र तपाईंसँग कहिले पनि पूर्णता हुँदैन। तर तपाईं एक दिनचर्या पत्ता लगाउनुहुनेछ र नयाँ सामान्य विकास गर्नुहोस्। अधिक तपाइँ सबै हालत मा समायोजित, अधिक राम्रो दिन तपाईं हुनेछ।
टेकको लागि सोध्नुहोस्।
बच्चाहरूको लागि मधुमेह व्यवस्थापनलाई धेरै उपकरणहरू चाहिन्छ: सिरिंज, इन्सुलिन, रगत ग्लुकोज परीक्षण मीटर, परीक्षण स्ट्रिप्स, रक्सी स्व्याब र अन्य वस्तुहरू। धेरै व्यक्तिहरू मानिलिन्छन् कि ईन्जेक्सन मात्र ईन्सुलिन लिनको लागि एक मात्र तरीका हो र टेस्ट स्ट्रिपहरू ग्लुकोज नाप्ने एक मात्र तरिका हो, तर त्यहाँ कुनै आकारको फिट हुने छैन। सबै मधुमेह व्यवस्थापन योजना छैन। ईन्जेक्सनको साथ, बच्चाहरूलाई प्राय दिनको दुई वा बढी आवश्यक हुन्छ। केहीले एक इन्सुलिन पम्प, एक पहिरनयोग्य उपकरण प्रयोग गर्न छनौट गर्दछ जसले दिनभरि इन्सुलिन वितरण गर्दछ र खानाको अगाडि इंजेक्सनको सट्टा बटनको पुशसँग इन्सुलिन प्रशासन गर्न सक्छ।
मधुमेह प्रविधिमा धेरै नयाँ प्रगतिहरू छन्, म्याक्रुडन भन्छन्। म बिरामीहरूलाई मधुमेह शिक्षा शिक्षकसँग भेट्न सल्लाह दिन्छु जसले मलाई त्यहाँका सबै विकल्पहरूमा ज्ञान छ।
एक इन्सुलिन पम्पले सिफारिस गरिएको स्तरहरूमा रगत ग्लुकोजको स्तर कायम राख्न सजिलो बनाउन सक्छ (यद्यपि अझै पनि निकट अनुगमन आवश्यक छ)। त्यहाँ रगतमा चिनी जाँच गर्नको लागी एक पहिरनयोग्य उपकरण पनि छ जुन निरन्तर ग्लूकोज मोनिटर (CGM) को रूपमा चिनिन्छ जुन पोर्टेबल उपकरण वा स्मार्टफोनमा रगत ग्लुकोजको स्तर पठाउन सक्छ। CGM हरूले औंला स्टिक्स र मिटरहरू भन्दा ग्लुकोजको स्तरमा प्रवृत्ति देखाउन सक्दछ, तर समयको लागि शरीरमा सेन्सर लगाउनु आवश्यक हुन्छ।
म तपाईंको बच्चालाई सीजीएम लिन सिफारिस गर्दछु, यदि सम्भव छ भने र यदि तपाईंको बच्चालाई यो सुहाउँदो छ भने, म्यासाचुसेट्स वेल्याण्डका सुसान कोटम्यान सुझाव दिन्छिन्, जसको छोरी दुई वर्ष अघि निदान गरिएको थियो। यसले मनको ठोस शान्ति ल्याएको छ, तर मेरी छोरीको रगत ग्लूकोजले उसले खाएको खाना र व्यायाममा कसरी प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने कुराको बारेमा अन्तर्दृष्टि। ... सीजीएमसँग उनको विस्तृत ग्लुकोजको स्तर देखेर, आवधिक औंला जाँचको विरूद्ध, मेरो लागि एक वास्तविक आँखा खोल्नेवाला थियो, र मलाई सिकाएको छ कि मैले पोषणको बारेमा बुझेको छु र यसले कसरी आफ्नो शरीरलाई असर गर्छ वास्तविकता होइन। कसैको जसको शरीरले इन्सुलिन बनाउन सक्दैन।
तर सहयोगी प्रविधिको प्रयोगले खाना, व्यायाम र इन्सुलिन खुराकमा छनौटहरूको माध्यमबाट सोचाइलाई प्रतिस्थापन गर्दैन। सब भन्दा ठूलो गलत धारणा यो हो कि यी उपकरणहरूले बिरामीको लागि सबै गर्छ, म्याक्र क्रोडेन भन्छन्। बिरामीलाई अझै समस्याको समाधान कसरी गर्ने सिक्नेमा सचेत हुनु आवश्यक छ। जबकि उपकरण सहयोगी छ, बिरामीले छनौटहरू गर्नुपर्दछ र सक्रिय रूपमा उसको आफ्नै देखभालमा संलग्न हुनुपर्छ, उनी भन्छिन्।
Find. समर्थन खोज्नुहोस्।
जोसँग मिल्छ अरूसँग कुरा गर्दा तपाईलाई आत्मविश्वास दिन र नयाँ दिनको दिनको बारेमा बुझन प्रदान गर्न सक्छ। यो भारी महसुस हुन सक्छ, तर तपाईं एक्लै हुनुहुन्न। १,,4०० बच्चाहरू र किशोर किशोरीहरूसँग निदान गरिन्छ टाइप १ मधुमेह प्रत्येक बर्ष। तपाईंलाई समर्थन गर्न वास्तविक जीवनको व्यक्ति खोज्नुहोस्, एक्लै नगर्नुहोस्, लेखक मोइरा म्याकार्थीले भने किशोर मधुमेहका बच्चाहरूका लागि सबै कुरा आमा बुबाको गाईड । उनको छोरी लरेन २२ वर्ष अघि age बर्षमा निदान गरिएको थियो।
अर्को आमा वा बुबा टाइप १ को साथ वयस्क फेला पार्नुहोस्, उनी सल्लाह दिन्छन्। तिनीहरूलाई खोज्ने सँधै तरिकाहरू छन्। तपाईं जुवेनाइल डायबिटीज रिसर्च फाउन्डेशन (JDRF) वा ADA को स्थानीय अध्यायमा कल गर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईंको एन्डोक्राइनोलजिष्टलाई सोध्नुहोस् यदि त्यहाँ समुदाय समूहहरू छन् जहाँ तपाईं अरूलाई कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। म्याककार्थीले स्वीकार गर्दछ कि त्यहाँ धेरै अनलाइन समर्थन समूहहरू छन् तर तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न चेतावनी दिन्छ। अनलाइन, त्यहाँ धेरै डर हुन सक्छ र यो सधैं तथ्यमा आधारित हुँदैन, उनी भन्छिन्। प्रकार १ निदानको माध्यमबाट ब्यक्तिको साथ सम्पर्कले तपाईंको परिवारलाई मिलाउन मद्दत गर्दछ।
provigil र nuvigil बीच के फरक छ?
Dreams. सपनाहरू जीवित राख्नुहोस्।
डायबिटीजलाई परिवर्तन नगर्नुहोस् जुन तपाईले सँधै सोचिरहनुभएको छ कि तपाइँको बच्चाले प्राप्त गर्न सक्छ। उनकी छोरी7मा निदान भएपछि, सुनारले केही adviceषि सल्लाहहरू सुन्नुभयो: हिजो मैले मेडेलिनलाई हिजोआज गरेका सबै आशा र सपनाहरू आज पनि मसँग भएका सबै आशा र सपनाहरू हुन सक्छन्, उनले भनिन्। म्याडेलिनलाई यस रोगको सिकार जस्तो नलाग्न वास्तवमै कडा प्रयत्न गर्छु। यदि उनलाई मनपर्ने खेल छ भने, उनी खेल्न सक्छिन्। उनी राति शिविरमा जान चाहन्थे, र हामीले उनलाई र उनलाई सुरक्षित राख्नको लागि एउटा तरिका पत्ता लगायौं। यो अधिक पूर्व योजना र दृश्यहरू पछाडि प्रबन्धन लिने छ, तर मैले आफैलाई भने कि उनलाई चाहिएको सबैकुरा गर्न मद्दत गर्ने एक तरिका भेट्टाउनेछु।
के मुक्केबाजी साँच्चै एक खुट्टा र कोर कसरत हो?
एंटीबायोटिक्स तपाइँ एक खमीर संक्रमण दिनुहोस्
तपाइँ कुन रगत को प्रकार हुनुहुन्छ निर्धारण गर्न को लागी
कहिले सम्म restasis बजार मा भएको छ
के तपाइँ अझै पनी योजना बी लिए पछि गर्भवती हुन सक्नुहुन्छ